विश्वप्रसिद्ध ‘होरिबा’ कम्पनी नेपालमा प्रवेश
काठमाडौं- जापानको क्योटोमा मुख्यालय रहेको होरिबा लिमिटेड जापानले नेपालमा पनि आफ्नो सञ्जाल जोडेको छ । टोकियोको प्रसिद्ध स्टक एक्सचेन्ज रहेको होरिबाको विश्वभरि नै आफ्नो सञ्जाल रहेका जनाकारी दिएको छ । सन् १९५३ मा स्थापित यस होरिबाले आफ्नो स्थापनाको ६५ वर्ष पुगेको अवसरमा काठमाडौंको होटल ¥याडिसनमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर आफ्नो बिजनेस नेपालमा पनि लन्च भएको घोषणा गरेको हो । योसँगै नेपाल र नेपाली ग्राहकहरूसँग पनि यो जोडिएको कम्पनीको दाबी छ । होरिबाको व्यापार, व्यवसाय अहिले विश्वभरि नै द्रुत गतिमा फैलिएको कम्पनीले जनाएको छ । अहिले पनि यो कम्पनीसँग ७ हजार कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । होरिबा अहिले भारतमा पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेको छ ।
सन् २००६ मा छुट्टै कानुनी रूपमा भारतमा दर्ता भएको होरिबा इन्डिया प्रालिले अहिले विभिन्न अटोमेटिभ टेस्ट प्रणाली, प्रोसेस एण्ड इन्भाइरोमेन्ट, मेडिकल, सेमिकन्डक्टर र वैज्ञानिकजस्ता ५ वटा छुट्टाछुट्टै व्यापार व्यवसायलाई अघि बढाएको छ । भारतमा यसको दिल्ली, पुने, बैंग्लोर, चेन्नई, कोचि, मुम्बई र हरिद्वार गरी विभिन्न ७ ठाउँमा क्षेत्रीय कार्यालय छन् । होरिबा मेडिकल सेग्मेन्टका प्रमुख डा. पिके सोजुले दिएको जानकारीअनुसार होरिबा इन्डियाको व्यापार आक्रामक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ । उनका अनुसार वृद्धिद्धर प्रतिवर्ष १५ प्रतिशतभन्दा पनि बढी छ । भारतमा पनि ५ सय कर्मचारी कार्यरत रहेको उनले जनाए । होरिबा इन्डियाका प्रेसिडेन्ट डा. राजीव गौतमको लक्ष्य यसको अहिलेको विद्यमान ३५०० भारुको रेभिन्युलाई बढाएर आगामी सन् २०२० सम्म ६ हजार मिलियन भारु पु¥याउने रहेको भन्दै होरिबाले नेपालमा पनि उद्यमका रूपमा प्रवेश गरेको जनाएको छ । नेपालका लागि होरिबा मेडिकलको आधिकारिक विक्रेता शिसस मेडिटेक प्रालि हो भने अटोमोटिभ टेस्ट प्रणालीअन्तर्गत हेलिक्स इन्टरप्राइजेज छ ।